Inothi Elivela Emgwaqeni | Martech Zone
ULwesine, April 26, 2018 Douglas Karr
Unyaka odlule kube unyaka omangalisayo kimi nakwibhizinisi lami. Ukuphinda kugxilwe futhi kunakwe kumakhasimende ami kube nezithelo futhi ngiyabonga kakhulu ngamakhasimende amangalisayo enginawo! Inselelo engibe nayo nomsebenzi wakhe wokulinganisa (engiwuthandayo) nempilo (engingayinakanga). Ngonyaka odlule, ukulimala okuhambisana nemikhuba emibi kududule udoti wami kakhulu futhi kungikhubaze kabuhlungu.
Kwakuyisikhathi sokukhipha futhi sigxile kabusha.
Ngohambo oluhlelwe ngaphambilini lokuya I-DellWorld, Ngisebenzise ithuba lokushintsha imihlangano futhi ngabeka okulindelwe namakhasimende engizobe ngisebenza emgwaqweni. Nginqume ukushayela imoto ngisuka e-Indianapolis ngaya eLas Vegas, ngithatha umzila oseningizimu obungeke ushintshe impilo.
Ukucabanga Ngezobuchwepheshe Nekusasa Lethu
Isikhathi sami esiningi sokuphumula sohambo ngisichithe ekucwaningeni umuntu ngamunye kwabangu-10 noma kwaxoxwa nabo esizokwenza ama-podcast ngawo Izibani zeDell. Ububanzi bezihloko nokusetshenziswa kobuchwepheshe kungaphezu komcabango wakho - qiniseka ukuthi ubhalisile. Ngiphinde ngahlala kwisethulo esinethonya kuleli sonto ngezibikezelo zobuchwepheshe besintu - okungenze ngacabanga kakhulu ngalolu hambo.
Ngoba ngiphethe okokusebenza kwami, ngiqashe i- a 2018 Chrysler Pacifica ngazo zonke izinsimbi namakhwela. Izici zifaka:
I-Carplay - isandiso se-iOS esisebenza ngokungenaphutha nge-mini-van, kusuka ekuzulazuleni, kuya kuSiri, kuya kumakholi, nasemculweni.
Ukulawulwa Kwezikebhe Eziguqukayo - ingqondo yami ishaywe ngokuphelele kulesi sici. Setha i-cruise control bese imoto izohambisana ne-traffic.
I-LaneSense - imoto ithola umzila wakho bese ikudonsela emuva lapho usuka kude kakhulu kwesobunxele noma kwesokudla. Futhi ungazami ukukopela ngokususa izandla zakho esiteringini - kuzokumemeza.
Amakhamera okupaka angama-360 - Angazi ukuthi basebenzisa muphi umlingo, kepha usizo lokusekelwa kokupaka aluyona into emfushane ngokuthakatha.
Ngenkathi sicabanga ngalezi njenge izici, iqiniso ukuthi leli ikusasa lokuxhumana komshini womuntu. Lutho uthathe umsebenzi wami okuvela kimi… zonke lezi zici zisizile futhi zithuthukisa ukuxhumana kwami ​​nomshini. Benza ukuthi idrayivu yami iphephe, bangisize ngigcine i-gas mileage enhle, futhi bengeze ukuzijabulisa kusuka ocingweni lwami baye emotweni. Kungakho-ke ngingakhathazeki ngekusasa, ngililindele ngabomvu.
Ukucabanga Ngokushoda Kwezobuchwepheshe Nekusasa Lethu
Ngenkathi ngifika eTexas, eNew Mexico, e-Arizona, nase-Utah manje, nginezikhathi eziningana zokuxhuma okungatheni ku-inthanethi. Ngezinye izikhathi, kwakukhona phakathi nendawo yokuzulazula! Ngivele ngashayela ngangena nakho konke. Azikho izexwayiso, ama-beeps, impendulo ye-haptic… ukuthula nje. Ngesinye isikhathi, ngema ebhulohweni laseNavajo ekushoneni kwelanga, ngaphumela ngaphandle, futhi ngamangala - kwakungekho lutho. Awukho umsindo, akukho okuphazamisayo, akukho bantu, wawungezwa ngisho nomoya. Angazi ukuthi ngiye ngakhululeka ngokwengeziwe.
Njengoba sihlanganisa futhi sisebenzisa ikusasa lethu ngokuzenzakalelayo, sizodinga isikhathi sokunqamula. Ngizokwenza umzamo omkhulu wokukwenza lokho isonto ngalinye. Angicabangi ukuthi ukuxhumeka okungu-24/7 kunempilo kimi. Kungenzeka kungabi okwakho.
Landela mina Instagram uma ungathanda ukubona ezinye zezindawo ezinhle engake ngaba kuzo. Ngishilo ku Facebook ukuze ngingaphinde ngindiza - ngicabanga ngazo zonke izinto ezinhle esizikhumbula kuleli zwe elihle endiza ngale esikhundleni se ukushayela ngemoto.
Ngingena nsuku zonke, bese ngima ngezikhathi ezithile ezitolo zekhofi. Namuhla, yi Inkampani i-River Rock yokosa. Lokhu kunjani ukubuka:
Ngakho-ke, bengifuna ukukwazisa ukuthi kungani - ngemuva kweminyaka eyi-15 yokushicilela - awubonanga okuthunyelwe okuningi kakhulu kula masonto ambalwa edlule. Ngokudla kwami ​​sekubuyele esimweni, ubuchopho bami buthola umoya omusha, umoya wami uphefumulelwe, kanye nengqungquthela yami enkulu yonyaka yonke ngenyanga efanayo… Ngibheke phambili ekubuyiseleni impilo yami ngoMeyi.
Phakathi kwaleso naleso sikhathi, uma ungathanda ukubhala okuthunyelwe kwezivakashi mayelana nobuchwepheshe bokuthengisa noma bokumaketha - zizwe ukhululekile ukushaya ifayela le- hambisa ikhasi bese ugcwalisa yonke imininingwane kuceliwe. Akunabaxhumanisi basemuva sicela.
Kumele uhambe… amandla ami aku-3%.
Tags: arizonadouglas karri-mexico entshauhambo lomgwaqoi-utah
Iwebhusayithi Yakho Kufanele Ibe Isikhungo Sendawo Yakho Njalo